Hotera Hyatt Nzvimbo Tegucigalpa: Kutanga kuvimbiswa muCentral America
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Hotera Hyatt Nzvimbo Tegucigalpa: Kutanga kuvimbiswa muCentral America
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Honduras Breaking News • Hospitality Industry • Dhinda Zviziviso • Press zvinoburitswa • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Green Globe certification inodada kuzivisa kuvhurwa chitupa cheHotera Hyatt Nzvimbo Tegucigalpa, Honduras. Kuzivikanwa uku ndiko kwekutanga kweiyo Hyatt Place brand muHonduras uye muCentral America, iyo inobatana neboka rakasarudzwa renyika nomwe dzeLatin America idzo dzine hunyanzvi hwepamusoro mukuita kwekushanya kwakasimba nekufamba munyika.
Green Globe ndiyo inotungamira pasi rese chitupa chirongwa cheyekufamba uye yekushanya indasitiri. Iyo yekuyera zviyero zvinoshandiswa zvinoenderana nesarudzo yezvinopfuura mazana matatu nemakumi matatu ezviratidzo zvekuteerera mune makumi mana ematanhatu setifiketi maitiro.
“Tinogutsikana zvikuru nemvumo iyi. Yakanga iri mwedzi gumi yekushanda nesimba kuzadzisa zvaidikanwa, asi nechinangwa chakajeka chekuti kubudirira uku kunogadzira mwero wepamusoro muindasitiri yehotera mudunhu, izvo zvakare zvinoratidza basa rakakura rekupa kugara uchidzidzisa kune vagari nevashanyi. Panguva imwecheteyo, inobvumidza kuzivikanwa kwematambudziko emuno anotarisana nemakambani nenharaunda kwatinoshanda, "akadaro Rafael Corea, General Manager weHyatt Place Tegucigalpa.
Kubva pakutanga, hotera iyi yakagamuchirwa pasi pechirongwa chekusimudzira maererano nemvura inopisa ine simba rinoshanda uye rinowedzerwazve. "Muchikamu chino, chinangwa ndechekuderedza kunwa kwemvura, simba uye gasi ne3%," anotsanangura Corea.
Kutevedzera zviitwa zvechitupa paHyatt Place Tegucigalpa zvakasangana nematanho akateedzana, kune vashandirwi, vashandi nevashanyi, sezvo zvaive zvakakosha kuti vashande kusimudzira miitiro isiri tsika munzvimbo yemuno. Kudzidza kupatsanura mapurasitiki, girazi, bepa nealuminium kwakada kudzidziswa uye kuwedzerwa kutarisirwa, kuitira kuti kugadzirisazve kuve tsika uye chikamu chetsika.
Chimwe chezvibvumirano zvekusimudzira mashandiro ekushandisa yaive chirongwa chegirini chekuchenesa makamuri, icho chakaendesa mari inosvika pamakumi maviri neshanu muzana mukudzikisira kwemvura nemakemikari.
Imwe chirongwa chakabudirira chave chiri chishandiso chinoshanda cheesimba zvichikonzera kuita kwese kuri nani zvichienzaniswa neanokwikwidza mahotera. Semuenzaniso, kunwiwa pahotera kuri zviuru makumi manomwe nezviviri pamwedzi, nepo mamwe mahotera ane hunhu hwakafanana anodya avhareji ye72 zviuru KwH pamwedzi.
Izvi zvinotsanangurwa nekumisikidzwa kweanopisa masisitimu emvura ane huwandu hwesimba rekutenderera, uko kudzikiswa kwemvura yekushandisa kwakawanikwa nekuichengeta patembiricha mumapombi, saka hazvichadiwe kuti vashanyi vairegedze ichimhanya kunotora mvura inodziya. Nekudaro, iko kuderedzwa kwesimba rekushandisa kwakagadziridzwa, nekuti iwo mutoro webasa pamapombi senge wakadzikiswa.
Hyatt Nzvimbo Tegucigalpa inotsvagawo kuronga kwayo kusimudzira kwekuedza mumabasa edzidzo uye nharaunda dzakachena, ichitsigira Shamwari dzeLa Tigra Foundation (Amitigra), isiri-purofiti inoona nezve manejimendi uye kuchengetedzwa kweLa Tigra National Park, muFrancisco Morazán nharaunda. Munzvimbo yeCorporate Social Responsibility, chirongwa chegore rinouya chichaona mubatanidzwa neiyo Educate2 foundation, ichichinjisa vanozvipira uye kudzidzisa vechidiki kubva kumisha yenheyo iyi mumitambo yehotera.
"Kupfuura chisimbiso, Green Globe certification ishanduko kune modus operandi. Iri kudzidza kuita zvinhu zvirinani, kupfuura misika yemamaki uye kuve vatungamiriri vakanaka munharaunda munowanikwa hotera iyi, "akadaro José Armando Gálvez, maneja wekusimudzira weLatam Hotel Corporation, kambani yekudyara iyo pari zvino ine mapurojekiti manomwe emahotera mukuvandudza mune akati wandei. maguta eGuatemala, El Salvador, Honduras neNicaragua, ayo anoronga kujoina zvishoma nezvishoma kuwana chitupa ichi.
“Hyatt Place Tegucigalpa ndiyo hotera yekutanga yakasimbiswa seGreen Globe muHonduras uye inobatana nevatungamiriri mukuchengetedza kwekuchengetedza vaeni muCentral America. Kwemakore anopfuura makumi maviri, Green Globe yanga iri yepamusoro mwero wepasi rose wekusimbisa chitupa mukufamba uye kushanya. Tichitanga gore idzva, tinofara kuti Hyatt Place Tegucigalpa irikubatana neboka redu repamusoro rezvivakwa zveHyatt munzvimbo pfumbamwe dzenyika, "akadaro Guido Bauer, CEO weGreen Globe.